ထိပ်တန်း ရုပ်သံဒရာမာဆု ရရှိခဲ့တဲ့ "Mr. Sunshine" ကိုရီးယားစီးရီး
ဂျပန် ကိုလိုနီတွေကို ပုန်ကန်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံဒရာမာ “Mr. Sunshine” ဟာ ဘူဆန်နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ Asian Content Awards ဆုပေးပွဲမှာ ထိပ်ဆန်းဆုကြီးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရုပ်သံစီးရီးတွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ အဲ့ဒီ ဆုပေးပွဲကို ဖန်တီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဆုပေးပွဲကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ ဘူဆန်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီဒရာမာရဲ့ ထုတ်လုပ်သူ Kim Yong-gyu က အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနိုင်မှုဆုကို လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူ Kim က “ကိုရီးယားဒရာမာ လုပ်ငန်းက ပြောင်းလဲနေပါပြီ။ ကျနော်တို့ဟာ အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲအတွက် အလုပ်လုပ်နေပါတယ်”
“Mr. Sunshine ဟာ အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲအတွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက အချစ်တွေ အများကြီးကို ပြသမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ နောက်တခါ ပိုကောင်းတဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်” လို့ ဆုလက်ခံရယူချိန်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အာရှဒရာမာဆုကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ “Hormones: The Series” နဲ့ စင်ကာပူရဲ့ “Faculty” တို့က ရရှိသွားပါတယ်။ အကောင်းဆုံး မင်းသားဆုကိုတော့ “The Longest Day in Chang’an” စီးရီးမှ တရုတ်မင်းသား Lei Jia Yin ၊ “The Fiery Priest” စီးရီးမှ ကိုရီးယား မင်းသား Kim Nam-gil နဲ့ “The Naked Director” စီးရီးမှာ ဂျပန်မင်းသား Yamada Takayuki တို့က ရရှိသွားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ “All Is Well” စီးရီးမင်းသမီး Yao Chen နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ “Wild Flower” စီးရီး မင်းသမီး Maja Salvador တို့က အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုကို ပူးတွဲ ရရှိသွားပါတယ်။
အကောင်းဆုံး စာရေးဆရာဆုကိုတော့ ကိုရီးယားစီးရီး “My Ahjussi” ကိုရေးသားတဲ့ Park Hae-young နဲ့ ထိုင်ဝမ်စီးရီး “The World Between Us” ကိုရေးသားခဲ့တဲ့ Lu Shih-yuan တို့က ရှိသွားပါတယ်။ ကိုရီးယား အဆိုတော် မင်းသား Kim Jae-joong က အထူးဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင် ရုပ်သံ ဒါရိုက်တာနဲ့ ထုတ်လုပ်သူ Raymond Lee က ဘဝတသက်သာအောင်မြင်မှု ဆုကို ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Topics: Mr.Sunshine, ထိပ်တန်း ရုပ်သံဒရာမာဆု, ဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်